Qaban qaabada shirweyne u dhaxeeya Qoomiyada oromada iyo Somaalida DDSI oo socota – Radio Daljir
Agoosto 2, 2019 3:22 b 0
Gudiga qaban qaabada shirwaynaha wadatashiga deegaanada soomalida iyo oromada ee ka dhacaya caasimada deegaanka ee jigjiga ayaa shalay galinkii dambe kulan ay yeesheen ,waxay uga hadleen shir muhiim ah oo u dhaxeeya somaalida dowlad degaanka iyo qoomiyada Oromada.
shirka wada tashiga waxaa ka soo qayb galaya ugu yaraan 700 qof oo ka socoda deegaanka oromada kaasi oo ay maalinta bari ah soo galayaan jigjiga martida ka socoda deegaanka oromiya.
Kulankan oo ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta dhexe ee XDS ayaa waxaa hogaaminayay madaxa xafiiska golaha dhexe ee XDS Eng maxamed shaale Isaaq iyo madaxa arimaha xisbiga xarunta dhexe ee XDS mudane Guuleed Ahmed Cali, waxaana ka soo qaybgalay xubnaha gudiga qaban qaabada shirwaynaha wada tashiga.
Gudigan qaban qaabada ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay guud ahaanba hawlihii u diyaar garowga shirka islanarkaana la sugayo soo galida martida ka imanayso deegaanka oromiya.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 114 Wararka 17734